नयाँ ऐनबाट कोही पनि डराउनु पर्दैन | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
नयाँ ऐनबाट कोही पनि डराउनु पर्दैन
भदौ ५, २०७५ मंगलबार १२:१०:५ | लक्ष्मणलाल कर्ण
भदौ १ गतेदेखि नयाँ मुलुकी संहिता कार्यान्वयनमा आएसँगै यसका केही विषयलाई लिएर विभिन्न क्षेत्रबाट संशोधन गर्नुपर्ने आवाजहरु उठेको छ । यो सकारात्मक चर्चा हो । असर परेको छ छैन भन्ने पछिको कुरा होला, तर यो चर्चा सकारात्मक छ । नयाँ कुरा आयो भने चर्चा हुनु, परिचर्चा हुनु, सबैले जान्न खोज्नु त राम्रै कुरो हो नि ।
अझै पनि केही बिग्रेको छैन । केही अप्ठ्यारै हो भने संशोधन गर्न सकिन्छ । संशोधन नै गर्न नहुने गरी हामीले कुनै धर्मग्रन्थ त बनाएका होइनौ नि । समाजलाई आवश्यक परेको बेला, अप्ठ्यारो परेको बेला जतिसुकै बेलामा यो ऐन संशोधन हुन्छ । २०२० सालको मुलुकी ऐनमा संहिताहरु तथा कार्यविधिहरु सबै एकै ठाउँमा थियो । त्यसलाई अलग अलग गरी चुस्त बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।
देशविदेशमा चलेको आधुनिक कानूनलाई समेट्दै हाम्रा ऐन कानून पनि आधुनिक बनाउन जरुरी थियो । यसैले पनि धेरै समयको मेहनतपछि हामीले यी संहिताहरु जारी गर्यौं र भदौ १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा पनि आइसकेको छ । यो संहिताको ड्राफ्ट गर्ने बेलादेखि नै निरन्तर छलफल हुँदै आएको हो । पहिलो संविधानसभामा छलफलबाट पारित हुन नसकेपछि फेरि दोस्रो पटक परिमार्जित व्यवस्थापिकाले यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍यायाे ।
तत्कालीन विधायन समितिले यी संहिताहरु विभिन्न क्षेत्रका व्यक्ति तथा संघसस्था, सरोकारवालाहरुसँगको छलफल र बहसपछि जारी गर्यो । जनजीविकासँग गाँसिएको कानून भएर पनि अहिले कार्यान्वयनमा जाँदै गर्दा यसको बढी चर्चा र सबैतिरबाट चासो भएको हो । यो हुनु त जायज हो । अहिले त पढेलेखेको समाज छ । ओपन सोसाइटी छ । यस्तोमा त जति चर्चा हुन्छ, जति छलफल हुन सक्यो त्यो नै उचित हो । चर्चा र छलफलबाटै एउटा सकारात्मक निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ नि ।
अहिले संहिता कार्यान्वयनमा आएसँगै चिकित्सकहरु आत्तिएको भन्ने सुनेको छु । यो भनेको त हामीले बनाएका ऐन कानून राम्रोसँग प्रचार प्रसार हुन नसक्दा र बुझ्न नसक्दा यस्तो अवस्था आएको मात्रै हो । त्यस्तो आत्तिहाल्नु पर्ने, डराईहाल्नु पर्ने अवस्था केही छैन । चिकित्सकले पनि के बुझिदिनुपर्यो भने हेलचेक्राईं गरेर इलाज त गर्नु भएन नि ।
यदि नियतले नै मार्ने भनिकन उपचारमा संलग्न छ भने उसलाई सजाय त हुन्छ नै । छुट त हुँदैन । एउटा साधारण व्यक्तिले कसैलाई मार्छ भने उसलाई सजाय हुन्छ भने के डाक्टर भइदियो भन्दैमा उसलाई चाहिँ छुट हुनु पर्ने हो र ? होइन नि ! तर सावधानीपूर्वक, इमान्दारीपूर्वक इलाज गर्छ भने त त्यसलाई सजाय हुने त कहीँ लेखेको छैन ।
यस्तै पत्रकारहरुले पनि हामीलाई पूर्ण स्वतन्त्रता छ भन्दैमा प्रत्येक व्यक्तिको प्राइभेसीको अधिकार हनन् गर्नु हुन्न भन्ने बुझ्न जरुरी छ । सबैको आफ्नो जीवनको गोपनियताको अधिकार छ । संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकार दिएको छ । त्यसलाई कहीँ कतै कसैले कुण्ठित गर्नु हुँदैन । गर्दैन पनि ।
त्यस्तै व्यक्तिलाई पनि गोपनियताको अधिकारको ग्यारेण्टी गरेको छ । हामीले केही गर्दा त्यसको अनुमति लिएर गरे के बिग्रन्छ र ? एउटा सभ्य समाजको निर्माण त तेही बेला पो हुन्छ त, जतिबेला आफ्नो अधिकार लिँदै गर्दा अरुको अधिकारको हनन् हुँदैन, सम्मान हुन्छ ।
जथाभावी फोटो छापिदिने, जथाभावी लेखिदिने गर्न त भएन नि । प्राइभेसीको राइट त छ नि मान्छेलाई । दुबैलाई आ–आफ्नो राइट दिएको छ । त्यसको त सम्मान गर्नु पर्यो नि ?
यस्तै प्रहरीले पनि बदनियतका साथ काम गरे उसलाई पनि सजाय हुने व्यवस्था ऐनले गरिदिएको छ । प्रहरी भनेको भगवान त होइन, देउता त होइन नि । त्यसैले उसले बदनियतका साथ काम गरेको भेटिए दण्ड सजायको व्यवस्था हामीले ऐनमा राखेका छौँ । अहिलेको ऐनले बदनियत गर्ने, अपराध गर्ने चाहे जोसुकै होस्, कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिँदैन । कारवाहीको दायरामा सबै आउनै पर्छ । कानूनको नजरमा सबै बराबर हो ।
मुलुकी ऐन एउटा सामान्य कानून हो । विषय विषयमा छुट्टै कानुन बनेको छ भने त्यही विषयगत कानून लागु हुन्छ । होइन भने मात्रै यो मुलुकी ऐन लागू हुने हो । अहिलेको कानून परिवर्तित समाज अनुकूल आएको छ । त्यसेलै काम पनि परिवर्तित तवरबाटै हुनुपर्ने जरुरी छ । कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरु प्रहरी आधुनिक बन्नु पर्ने छ । अदालत आधुनिक बन्नु पर्ने छ ।
कसैकसैले त यो ऐनले अब मान्छेलाई खाली जेलैमा राख्ने भयो कि के हो भनेर पनि भन्न भ्याए । तर त्यस्तो हैन । यो ऐनले त धेरै कुरामा सहुलियत दिएको छ । अपराधीका लागि खुला जेलको परिकल्पना गरेको छ । सामाजिक काममा लगाउनु पर्ने कुरा गरेको छ । जति हामी आधुनिकतामा प्रवेश गर्दै जान्छौं, सभ्य बन्दै जान्छौं, त्यसैअनुरुप कानून पनि सबैलाई समेट्नु पर्ने त हुनु पर्यो नि ।
सभ्यताको परिचय दिनका लागि हाम्रो सभ्य व्यवहार पनि निश्चित गर्न कानूनहरु बन्दै जानु पर्यो । त्यही अनुरुपको कानून हामीले निर्माण गरेका छौं । अझै केही समेट्नु पर्ने, संशोधन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यसलाई पनि सँगसँगै अघि लैजान जरुरी छ ।
कुनैबेला मान्छेले जुत्ता नलगाई हिँड्ने चलन थियो । जुत्ता लगाउँदा मान्छेको खुट्टामा घाउ हुन थाल्यो । यो जुत्ता त नलगाएकै ठीक रैछ क्या हो भन्ने केहीलाई लाग्यो । पछि निरन्तर जुत्ता लगाउँदै जाँदा त्यो घाउ पनि आफैं ठीक हुँदै गयो । जुत्ताको घाउ जुत्ताबाटै ठीक भयो । त्यस्तै यो ऐन पनि भर्खरै कार्यान्वयनमा आएको छ । कार्यान्वयनमा चुनौती नै छैन भन्नु त उचित नहोला, तर गर्दै जाँदा क्रमशः चुनौतीहरु हट्दै जान्छन् । काम गर्दै जाँदा थाहा पाउँदै गइन्छ । अप्ठ्यारो पर्दा परिवर्तन, संशोधन पनि हुँदै जान्छ । अहिले आत्तिनु पर्ने, अप्ठ्यारो परिहाल्ने त्यस्तो कुनै समस्या छैन ।
(बरिष्ठ अधिवक्ता एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णसँग नवराज फुयाँलले गरेकाे कुराकानीमा आधारित । कर्णकै संयोजकत्वमा बनेको समितिले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) जारी गरेकाे हो ।)
कर्ण बरिष्ठ अधिवक्ता एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनुहुन्छ ।
आज प्रदेश १, २ र गण्डकी प्रदेशको केही ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने
आङरिता शेर्पा : जसको काम किंवदन्ती जस्तै लाग्छ
आज ललितपुरका विभिन्न ठाउँमा एक घण्टा बिजुली नआउने
राष्ट्रिय सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिवस मनाइँदै : असुरक्षित गर्भपत...
दैलेखमा बालविवाह गर्ने दुई जोडी पक्राउ
विप्रेषण आप्रवाहमा २३ प्रतिशतले वृद्धि
पाल्पाको रम्भामा पहिरोले घर पुरिँदा हराएका ५ जनाकै शव भेटियो
राष्ट्रसङ्घलाई प्रधानमन्त्री ओलीकाे सुझाव : बहुपक्षीयवाद सङ्कीर्ण ...
आईपीएलमा दिल्लीको दोस्रो जित, चेन्नई ४४ रनले पराजित
खोपकाे व्यापक प्रयोग हुनु अघि नै कोरोनाका कारण झण्डै २० लाख ...
'कुलमान नहुँदा बत्ती गयाे' भन्ने हल्ला बढेपछि ऊर्जा मन्त्रालयमा बैठक